Iran: Ahiahy Momba Ny Ady Sy Ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2017 18:40 GMT
Raha sady efa mandà ny fampitsaharana ny fandaharana fanatavezany ny oraniôma ao aminy i Iran, na dia eo aza ilay fanambaran'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1737, dia mbola voampangan'ny Etazonia ho mandefa baomba any Iraka ihany koa izy. Mihevitra ny fanatavezany ny oraniôma ao aminy ho toy ny zony i Iran ary mandà ny fiampangan'i Amerika azy ho mpanondrana baomba any Iraka. Feno tombatombana mikasika ny fikasan'i Amerika hanafika an'i Iran sy ny sisa ireo gazety sy vohikala maro mpilaza vaovao. Samy miantso ireny tombatombana ireny ho tsy marim-pototra ny fanjakana Amerikana sy Iraniana.
Mizara ny heviny mikasika ny toejavatra mitranga ankehitriny ao amin’ity sariitatra ity i Nikahang, mpanao sariitatra sy bilaogera malaza. Amin'ny teny Persianina izany, ka ity no dikany: ”Tsy ara-tafika ny asa ataonay.”
Samy tsikerain'i Mr Behi na ny fanjakana Iraniana na ny fampielezankevitra Amerikana. Hoy izy:
Mpanakiana (ny) fanjakana Iraniana aho, ny fomba fitondran-dry zareo ny zon'olombelona sy ny fahalalahàna miteny miaraka amin'ireo zavatra maro hafa, kanefa sady tezitra ihany koa aho amin'ny fomba iezahan'ny Etazonia manangona fomba hanaovana tsindry hazo lena an'i Iran na hanafika ny vahoaka Iraniana…Mamely ny sain'ny fiarahamonina iraisam-pirenena ny Etazonia…mamafy baomba ny lôjika…mikendry ny salama saina…eny, afaka mandaroka baomba ahy ianareo fa aza mihevitra na dia kely fotsiny aza hoe ho dondrona aho ka hamadika ny tsy fankasitrahako ny fanjakana Iraniana ho fankatoavana ny militarisma…aza sahy akory ny handaroka baomba ny sainay.
2.700 andro am-ponja noho ny Tshirt iray
Tsy ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny ady miaraka amin'ny Etazonia irery ihany no mampanahy ireo Iraniana bilaogera. Lohahevitra mafana iray hafa ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana ny zon'olombelona sy ny toe-pahasalamana marefon'i Ahmad Batebi. Nitokona tsy hisakafo i Batebi, mpianatra mpikatroka mafana fo iray, satria voasambotra koa ny vadiny.
Mihevitra i Khorshid Khanoum fa tsy ho tafavoaka velona [Fa] anivon'ireo vaovao momba ny ady manerana ny media sy ireo fifandirana eo amin'i Bush sy i Ahmadinejad i Ahmad Batebi, ary mety hitovy lahatra amin'i Akbar Mohammadi. Maty tany am-ponja tamin'ny fomba mampiahiahy i Mohammadi. Milaza ilay bilaogera fa lasa very fanantenana toa ny olona an-tapitrisany maro izy mikasika ilay toejavatra. Manampy am-panesoana izy: ”Miandry ny fahafatesany izahay mba hanangonana ny lisitr'ireo rohy mankany amin'ny bilaogy izay nanoratra momba azy.”
Milaza i Azarmehr fa nentina tany amin'ny hopitaly tamin'ny Zoma (16 Febroary 2007) taorian'ny tsy nahatsiarovany tena ilay Iraniana mpianatra izay voasazy hifonja 15 taona nandritra ny fitondran'i Khatami, noho ny nananganany T-shirt mihoson-drà anà mpiara-mianatra nandritra ny hetsika fanoherana am-pilaminana nataon'ny mpianatra.
Milaza i Abtahi, mpanao politika refôrmista iray, fa sady tsy ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny voavela heloka no sady tsy hanana toerana na lohateny natokana ho azy ao amin'ny gazety [Fa] i Batebi. Milaza ilay bilaogera fa tena toe-javatra mampitebiteby ny fanjavonan'ny ahiahy mikasika ny zon'olombelona ao amin'ny fiarahamonintsika. Maniry ny hanafahana tsy ho ela an'i Batebi ity bilaogera ity.